Accueil > Gazetin'ny nosy > Marché public : Iavoloha ihany no mahazo mividy ny solosaina
Marché public : Iavoloha ihany no mahazo mividy ny solosaina
Talen’ny fitantanan-draharaha sy ny vola (Directeur administratif et financier) any amin’ny ministera maro no velon-taraina ankehitriny fa nalefa eny Iavoloha avokoa ny vola notantanan’izy ireo izay nokasaina hividianana ireo solosaina na “ordinateur” hampiasan’ny departemanta iandraiketany amin’ny fanatanterahana ny asa any amin’ny ministera. Io ilay antsoina mahazatra hoe “marché public” izay fifidianana entana ataon’ny fanjakana. Tsy ny eto Antananarivo ihany no tratran’izany baiko izany fa ireo any amin’ny faritany sy ny faritra koa. Nongotana teo ampelatanan’ny DAF sy ny PRNP (Personnel responsable du Marché public) ny fividianana entana.
Vola hatrany amin’ny 50 miliara ariary mahery any ho any no vinavinaina fa hividianana izany solosaina izany hoy ireo mpikirakira ny vola any amin’ny ministera ireo sy ny sampandraharaha maro manana io. Efa herinandro mahery izao no nahatongavan’ny famindrana ny vola ho eny Iavoloha.
Mitaraina ny DAF sy ny PRNP satria dia midika fa tsy fahatokisana intsony ny mpiasa any amin’ny ministera sy ny mpiasam-panjakana ambony izany.
Marina ihany nefa ny fihetsika ny eny Iavoloha izao satria dia niaraha-nahita fa tamin’ireny mpiasam-panjakana ambony mpikarakara ny fampiasam-bolam-panjakana ireo no tena nanao kilkoly teto amin’ity firenena ity ka isan’ireo nampahantra ny firenena izao teo amin’ny fitondrana teo aloha.
Raha izay no tanjona amin’izao raharaha izao dia rariny sy hitsiny no nangalana ny fividianana azy ho eny Iavoloha izao.
Na izany aza dia enga anie ka tsy ho kolikoly avolenta ampiasan’ny mpitondra sasany eny Iavoloha koa izao raharaha izao satria maro koa no mandinika fa misy zavatra tsy mazava ny fangalana ny vola avy any amin’ny departemanta tsirairay ireo.